बाल अधिकार दिवसका अवसरमा इशान अस्पतालमा चित्रकला प्रतियोगिता – Ishan Hospital
बाल अधिकार दिवसका अवसरमा इशान अस्पतालमा चित्रकला प्रतियोगिता
काठमाण्डौं । अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका अवसरमा इशान अस्पतालले चित्रकला प्रतियोगिता गरेको छ । प्रतियोगितामा अस्पतालमा उपचाररत ९ जना बालबालिका सहभागि थिए । उपचाररत बालबालिकाले आफ्नो इच्छ्या अनुसार चित्र कोरेका थिए ।
प्रतियोगितामा सहभागि सबै बालबालिकालाई पुरस्कार पनि दिइएको अस्पतालका प्रमुख डा.आर पी चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाल अधिकारको कुरा मात्रै गर्नेहरु धेरै भएको तर उनीहरुको विषयमा गम्भिर भएर लाग्ने कमै भएको बताउनुभयो ।
अस्पतालमा उपचाररत बालबालिकालाई कार्यक्रममा समावेश गराएर उनीहरुको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको डा. चौधरीले बताउनुभयो
अस्पतालमा उपचाररत बालबालिकालाई कार्यक्रममा समावेश गराएर उनीहरुको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको डा. चौधरीले बताउनुभयो । भविष्यका कर्णाधार बालबालिकाका बिषय तथा उनीहरुको रुची खास प्राथमिकतामा नपरेको अवस्थामा अस्पतालले बालबालिकाको रुची र क्षमतालाइ प्रोत्साहन गर्ने कोशिश गरेको उहाँको भनाइ छ । डा. चौधरीले बालबालिकाको स्वास्थ्य संगै उनीहरुको रुची र क्षमतालाई अभिभावकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बालबालिकाको स्वास्थ्यको विषयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि बाल अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरुको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने डा. चौधरीको भनाइ छ ।